के हो प्लास्टिकको चामल ? - Dainik Nepal
के हो प्लास्टिकको चामल ?
अर्जुन पाण्डे २०७४ असार ३१ गते ८:२८
हाम्रो देश यस्तो देश हो जुन हल्लै हल्लाले चलेको छ । हल्लाकै भरमा यहाँ ठूला हडताल जुलुस भएका छन् । हल्लामै गोली चलेर मानिस मरेका छन् । जब देशको सरकार निकम्मा हुन्छ, राज्य करीब करीब असफल जस्तै हुन्छ, तब जनताको सरकारमाथी विश्वास हराउँछ र मानिस हल्लाको पछि लाग्न बाध्य हुन्छ । भिन्नभिन्न समय क्रममा भिन्न हल्लाहरुले बजार लिन्छन् ।
हिजोआज एउटा हल्लाले बजार तातेको छ, प्लास्टिक चामलको । मानिसमा शंकाउपसंका जन्मिएका छन् । भर्खरै आफूले खाएको वा भरे खाने चामल प्लास्टिक पो हो कि ? प्लास्टिकको चामल पेट भित्र गएर पच्ने हो कि हैन, पचेन भने के कस्तो स्वास्थ समस्या हुने हो ? यस्तै यस्तै ….डराएका पनि छन् मानिस । हामी नेपालीको प्रमुख खाना नै हो भात । मुख्य खाने कुरामाथी नै यसरी हल्ला चली सकेपछि सबैलाइ सतर्क बनाउने नै भो । यति मात्र हैन अहिले हाम्रो प्रहरी प्रशासन, खाद्य गुण नियन्त्रण निकाय समेत संलग्न भैसकेका छन् । संकास्पद चामल प्रयोगशालामा परीक्षण खेपिरहेको छ ।
नेपालमा पलास्टिकको चामलको हल्ला पहिलो पटक हो । अन्य देशमा भने पुरानो भैसकेको छ । जहाँजहाँ यो हल्लाचलेको थियो र यस्तो चामल प्रयोगशालामा परीक्षण गरियो । कुनै ठाउँमा पनि यो सत्य साबित भएन । फगत हल्ला मात्र थियो । छिमेकी देश भारतमा सन २०१० मा आन्ध्र प्रदेशदेखि चलेको यो हल्ला नयाँदील्ली, पश्चिम बंगाल र कर्नाटकासम्मा फैलियो । प्लास्टिकका अण्डा, पलास्टिकका चिनी, चामल बजारमा आएको हल्ला चल्ने बित्तीकै कर्नाटकाको खाद्य आपूर्ति मन्त्री यूटी खदेरले सबै नमूना परीक्षण गराए र तत्काल यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न नागरिकहरुलाई आह्वान गरे ।
रोचक त के भयो भने परीक्षणमा संलग्न बिशेषज्ञहरुले प्लास्टिकको चामल हुने हो भने सामान्य चामलभन्दा धेरै महँगो हुन जान्छ । तसर्थ यसको कुनै व्यापारिक अर्थ रहन्न । यस्तै हल्लाचले पछि दिल्ली खाद्य सुरक्षा बिभागले बजारको विभिन्न स्थानबाट २७ नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्यो तर कुनैमा पनि त्यस्तो प्लास्टिक पाइएन ।
अनुसन्धानकै शिलसीलामा के पनि पाइयो भने भारत आफैमा प्रचुर मात्रामा धान उत्पादन गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि चीनबाट चामल आयात हुन थाले पछि यस्तो चामललाई निरुत्साहित गर्न यो हल्ला चलाइएको पनि कसैले लखकाटे । त्यस्तो हल्लामा घुमाइ फिराई स्थानीय चामल उपभोग गर्ने सल्लाह जोडिएर आउँथ्यो । भनिन्थ्यो, आफ्नै उब्जनी खाऔं, निरोगी बनौं ।
बास्तवमा प्लास्टिकको चामलको यो हल्ला भारत र नेपालमा मात्र पनि सीमित छैन । केही समयअघि जब चीनमा यस्तो हल्ला चल्यो, तब तुरुन्त नमूनाहरु संकलन गरियो र बैज्ञानिक परीक्षण गरियो । हल्लामा सत्यता भेटिएन । भनिन्थ्यो, यस्ता चामल, आलु र सखरखण्ड मिसाएर बनाइन्छ र प्लास्टिक कोट गरिन्छ । मलेसियामा यस्तो हल्लाचलेपछि चामल थोक बिक्रेता एसोसियसनका अध्यक्षले बक्तब्य नै निकालेर भने चामलमा यस्तो प्लास्टिकका चामल मिसाउँदा कुनै नाफा हुन सक्दैन । बरु घाटा हुन्छ ।
सामान्य जनमानस मात्र होइन, ठूला भनिएका समाचार संस्थाहरुलाई पनि यस्तो हल्लाले सिकार नबनाई छाडेन । सन् २०१६ डिसेम्बरमा बीबीसी र सीएनएनले नाइजेरियामा ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक चामल जफत गरिएको समाचार प्रसारण गरे । तत्काल नाइजेरियन सरकारले छानबिन गर्यो पनि । तर त्यसमा प्लास्टिक भेटिएन बरु चामलमा हुनु पर्ने भन्दा बढी ब्याक्टेरिया भएको पाइयो जुनखान योग्य थिएन ।
बढ्दो सन्चार साधनको ब्यापकता र हामीमा कुनै पनि बिषयलाई खोजी गरेर हेर्ने अनि मात्र सम्पे्रशण गर्ने बानीको ह्रास हुँदै जानु, सामाजिक सन्जालहरुको व्यापकता हुँदै जानु र मानिसमा आफ्नो दायित्वबोधमा कमी हुँनाले यस्ता हल्लाले प्रश्रय पाउँछन् ।
सबैतिर भएका बैज्ञानिक अनुसन्धानबाट के पुष्टि भएको छ भने, बास्तबमा हल्लाचले जस्तै चामलमा ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक मिसाउनुको कुनै ब्यापारिक प्रयोजन हुन सक्दैन किनकी सामन्य चामलभन्दा यस्तो प्लास्टिक महँगो पर्न जाने रहेछ ।
साथै महँगोमा बिक्री हुने प्रिमियम बासमती चामलमा भने यस्ता कुनै मिसावट हुन सक्ने संभावनालाई चाहिँ नकार्न सकिन्न । संबन्धित निकायहरु चनाखो हुन र जनस्वास्थप्रति संबेदनशील हुनु जरुरी छ । फेरि पनि घुम्दै फिर्दै बजारमा यस्तो हल्ला चलीरहँदा हामीले पनि आफ्नोे खेतबारीमा खेती गर्ने र आफ्नै ताजा उब्जनी खाने बानी बसाल्ने हो भने हल्लाले केही असर पर्ने थिएन ।
(बिविध सामाग्री अध्ययनबाट )